प्रेमी संग मिलेर मध्यरातमा श्रीमानको ह’त्या, विहान रुँ’दै आँफैले छिमेकी गुहारीन् ! - हातेमालो डेली
प्रेमी संग मिलेर मध्यरातमा श्रीमानको ह’त्या, विहान रुँ’दै आँफैले छिमेकी गुहारीन् !
विराटनगर । विराटनगरमा दुई दिन अघि र ह स्यमय निधन भएका औ ष धि ब्यवसायी देवीप्रसाद दुलालको ह त्या उनकै श्रीमतीले गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरी अनुसन्धानवाट उनकै श्रीमतीले प्रेमीसंग मिलेर श्रीमानको ह त्या गरेको खुलेको हो । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ खनार घर भएका ३३ वर्षीयदेवीप्रसाद दुलालको आइतबार बिहान ह त्या भएको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिका–१० मधुमारा स्थायी घर भएका दुलाललाई उनकै श्रीमतीले छिमेकी र अन्य साथीको सहयोगमा वे’हो’सी अवस्थामा अस्पताल लगेकी थिइन् । श्रीमानलाई वे’हो’सी अवस्थामा विस्तारामा देखेको भन्दै उपचारका लागि लगिएको थियो ।
तर उनको उपचार सुरु नगर्दै चिकित्सकले मृ त घोषणा गरेका थिए । उनको ह’त्या मा उनकै ३३ वर्षीया श्रीमती मीना श्रेष्ठ दुलाल र उनका प्रेमी सिरहाको लाहान नगरपालिका–११ घर भएका २१ वर्षीय ब्रह्मदेव साहको संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारमिभक अनुसन्धानवाट खुलेको छ । दुवै जनालाई प्रहरीले प क्रा उ गरिसकेको छ ।
ब्रह्म्मदेवले खुट्टा र शरीर थि’चे पछि श्रीमतीले घाँ टीमा क’सेर हरत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको जनाएको छ । त्यो क्रममा र स्सा क स्सी हुँदा दुलाललाइ शरिरको अन्य भागमा पनि चोट लागेको छ ।
दुलालले मधुमारामा घर भाडामा लिएर देवी माँ पाथीभरा फर्मा नामको औ ष धिको डिलर सञ्चालन गर्दै आएका थिए। प्रहरीले सोही घ टना मा छानविन गर्न उनको श्रीमती सहित अन्य २ जनालाई प क्रा उ गरेको थियो ।
उनीसंगै सो दिन राति म दि रा सेवन गरेका दुलालका २ जना साथीको भने संलग्नता नभएपछि प्रहरीले छोडेको छ । श्रेष्ठ र काफ्ले थर भएका दुई जना साथीहरुसंग कोठामा म दि रा से वन गरेका थिए । दुई जना साथी कोठावाट गएपछि श्रीमतीले प्रेमी आफ्ना प्रेमीलाई बोलाएर ह त्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ ।
Previous articleतुरुन्तै प्रयोग गर्नुहोस, खोकीको उपचारको लागी १० घरेलु उपाए
Next articleयो एक शब्द जसले सुमधुर बनाउँछ, तपाईंको सम्बन्ध